अध्ययन रत्नशास्त्र - जेमोलॉजी कोर्स - नयाँ उपलब्ध अपडेट २०२१
नयाँ : अध्ययन रत्नशास्त्र अनलाइन
मार्च २०२० देखि यात्रा गर्न नसक्ने हाम्रा विद्यार्थीहरूको ठूलो मागको कारण, अब अनलाइन पढ्न सम्भव छ।
हामी मल्टि क्यामेरा प्रणालीको साथ सिकाउनका लागि बिभिन्न सफ्टवेयर प्रयोग गर्छौं: जुम, स्काइप, WeChat, व्हाट्सएप ... हामी तपाईंको प्राथमिकता अनुसार कुनै अन्य सफ्टवेयर प्रयोग गर्न सक्छौं।
जेमोलजी भनेको के हो?
हामी अंग्रेजी वा फ्रेन्च भाषामा जेमोलॉजी सिकाउँछौं
आधा दिन (3 घन्टा)
पूरा दिन (2 एक्स 3h =6घन्टा)
के आशा गर्नु
कृत्रिम र ट्रिटमेन्ट
मूल्य निर्धारण र ग्रेडिंग
जेमोलॉजी रत्न सामग्रीको विज्ञान हो, र विज्ञान खनिज विज्ञानको पुरानो शाखाको एक विशेष अफशूट। अध्ययन रत्नशास्त्र रत्न सामग्री र रत्न सामग्री को सबै प्राविधिक पक्ष कभर।
तिनीहरूको रासायनिक, भौतिक र अप्टिकल गुणहरू, रत्नको नक्कल र सिंथेटिक्सको उत्पादनका लागि प्रविधिहरू, रत्नहरूको काट्ने र चमकाने, र अझ महत्त्वपूर्ण कुरा यो रत्नशास्त्र कोर्स विधि र औजारहरू रत्नहरूको पहिचान, ग्रेडिंग र मूल्या .्कनमा कार्यरत छन्।
शब्द 'मणि सामग्री' संभावनाहरूको एक विशाल श्रृंखला कभर। धेरै रत्न सामग्री खनिज हो, तर 3000००० वा त्यस भन्दा बढी, खनिज मानिसलाई ज्ञात छ, केवल 70० भन्दा बढी परिवार / 500०० ढु stones्गाहरूलाई विशेष प्रकारको रत्न भनिने गुणहरू मानिन्छ।
मुख्य रत्नको लागि परिचय सामान्यतया बजारमा पाइन्छ। यो सुरुवात, अग्रिम वा विशेषज्ञ स्तर कोर्सले त्यस्ता रत्नहरूको महत्त्वपूर्ण पक्षहरूलाई जोड दिन्छ।
1 व्यक्ति: 200 $
2 देखि4व्यक्ति: 120 $ / प्रति व्यक्ति
5 व्यक्ति +: 100 $ / प्रति व्यक्ति
1 व्यक्ति: 400 $
2 देखि4व्यक्ति: 240 $ / प्रति व्यक्ति
5 व्यक्ति +: 200 $ / प्रति व्यक्ति
* मूल्यहरू तपाईंको आफ्नै बुकिंगबाट व्यक्तिको संख्यासँग मात्र सम्बन्धित छ * कम्तिमा2हप्ता अग्रिम बुकिंग कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस बुकिंग को लागी।
नक्कली रत्न विक्रेताहरूको पासोमा कसरी पर्दैन? प्राकृतिक रत्न, सिन्थेटिक्स, उपचार कसरी पहिचान गर्ने? गुणस्तर र मूल्य निर्धारण कसरी गर्ने? यो कक्षाको समयमा तपाइँ तपाइँका सबै प्रश्नहरूको जवाफहरू पाउनुहुनेछ
वर्ग कार्यक्रम समावेश:
रत्न पत्थर ऑप्टिकल घटना
गिलास भर्ने / फ्र्याक्चर फिलिंग / फ्लक्स हिलिंग
C सी को नियम:
रत्नको पत्थर कहाँबाट आउँछन् र कसरी तिनीहरूको विभिन्न पक्षहरू सफलतापूर्वक पहिचान गर्न सकिन्छ भन्नेको उच्च समझको साथ कक्षा छोड्नुहोस्।
प्रोफेसर डा। मोहम्मद मोहम्मद टोल्बा SAID रत्न विज्ञान मा प्रशिक्षण कोर्स पूरा गरिसकेका छ। १ दिन (hours घण्टा) “१ 15 अप्रिल २०१ 2015 मा मैले कम्बोडियाको जेमोलजिकल इन्सिटिच्यूटमा जेमोलॉजिकल गहन पाठ्यक्रम सिक्नको लागि अत्यन्तै रमाइलो र रोमाञ्चकारी दिन बिताएको थियो। जीन-फिलिप6घण्टाको अध्ययनको क्रममा मेरो शिक्षक थिए, ऊ जेमिलोजीमा पेशेवर छ। मलाई लाग्छ कि जेमोलजिकल इंस्टिट्यूट कम्बोडिया रत्न र रत्नको बारेमा बढी ज्ञान लिनको लागि सही स्थान हो। "
श्री SERGIO (इटाली बाट) र सुश्री Wiria (थाईल्याण्ड बाट) gemology मा प्रशिक्षण कोर्स पूरा गरिसकेका छन। आधा दिन (hours घण्टा) "फिलिप इल प्रोप्राइटरियो è ऊना व्यक्तित्व मोल्टो कम्प्याटेन्ट ई प्रोफेशनल नेल क्याम्पो डेला जेमोलोगिया, नो अब्बाइमो फट्टो अन कोर्सो डि मेजा गियोर्नाटा इन क्यूआई सीआई हाइड्रोडोटो नेल मोन्डो डेल जेम्मे.हा उना शोरूम नोटभोले डि इमेन्टिक रूसी इन्टिओसिएन कम्बोगियन ...ezaffiri veri bimari recatevi da Philippe èil n ° 1aSiem reap। Inoltre se volte ”- मे,, २०१ 5
श्री CARL (इ England्ल्याण्डबाट) र सुश्री AGYNESS (चीनबाट) रत्नशास्त्रको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा गरिसकेका छन्। १ दिन (hours घण्टा) जुलाई ,०, २०१
श्री तोह हक एक (ताइवानबाट) रत्नशास्त्रको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा गरिसकेका छन्। आधा दिन (hours घण्टा) अगस्त १,, २०१।
मास्टर Hanz Cua (फिलिपिन्सबाट) रत्न विज्ञान मा प्रशिक्षण कोर्स पूरा गरीसक्यो। आधा दिन (hours घण्टा) अक्टुबर १,, २०१।
श्रीमती राम्या पोन्नडा र श्रीकृष्ण कान्ति पोन्नडा (भारतबाट) रत्नशास्त्रको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा गरिसकेका छन्। आधा दिन (hours घण्टा) नोभेम्बर १२, २०१
श्री सोनी रोड्रिग्ज र सुश्री टिफनी रोड्रिग्ज (फिलिपिन्सबाट) रत्नशास्त्रको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा गरिसकेका छन्। आधा दिन (hours घण्टा)"यदि ग्यारेन्टी मणि पत्थरहरू आवश्यक छ भने, यहाँ जानुहोस्" - म पुरानो बजारमा बेचिएको रत्न ढु stones्गाका सम्बन्धमा उत्तरहरू खोज्दै थिएँ र यो स्थानले मलाई सबै जानकारीहरू प्रदान गर्‍यो जुन मलाई विशेष गरी ती मणिहरूको सत्यता जान्न आवश्यक थियो। स्पष्ट रूपमा मार्केटका प्रायः मणि स्टोरहरूले तपाईंलाई नक्कली बेच्ने छन्।
म h घण्टाको कार्यशालामा भर्ना भएँ र यसले निश्चित रूपमा मेरो ज्ञान रत्नहरूको बारेमा विस्तार गर्दछ। तिनीहरूले मलाई पछि प्रमाणपत्र दिए र यो वास्तवमै योग्य h घण्टाको थियो। श्री जीन रत्नको बारेमा साँच्चिकै भावुक छन्। तिनीहरूको वेबसाइट जाँच गर्नुहोस्, तिनीहरूसँग सम्पर्क राख्नुहोस् र उनीहरूसँग टुक-टक हुनेछ तपाईंको होटलमा। जे भए पनि तपाई रत्नहरू अध्ययन गर्न इच्छुक हुनुहुन्न केवल भ्रमण गर्नुहोस् र देख्न सक्नुहुन्छ रत्नहरू बिक्रीको लागि उपलब्ध छ - नोभेम्बर १२, २०१ 3
श्री थोरस्टाइन र श्री विदर (नर्वेबाट) रत्नशास्त्रको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा गरिसकेका छन्। आधा दिन (hours घण्टा) नोभेम्बर १२, २०१
टम र क्रिस्टिन (संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट) र नोर्मा र ट्रेभर (क्यानाडाबाट) ले रसायनशास्त्रको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा गरे। नोभेम्बर 22, 2015
कन्स्टान्टिन र सिल्भिया (बुल्गारियाबाट)। नोभेम्बर 28, 2015
माईल, जुलाई, रोजी, टिली र सेलेस्टे (इ England्ल्यान्डबाट)। डिसेम्बर 22, 2015
सुश्री ली हुई यू (सिंगापुरबाट) डिसेम्बर 23, 2015
आन्निक र म्याक्सिम (अष्ट्रेलियाबाट) डिसेम्बर 28, 2015
चमेली, ब्रुस र एलन (फिलिपिन्स बाट) डिसेम्बर 29, 2015
एन र मरियम जनवरी 8, 2016
मार्क र लानी, लस एन्जलस, क्यालिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका बाट जनवरी 10, 2016
सुश्री रूथ, इन्डोनेशिया बाट जनवरी 12, 2016
श्री जेफ, संयुक्त राज्य अमेरिका देखि जनवरी 13, 2016
जोशुआ र माइकल, संयुक्त राज्य अमेरिका बाट जनवरी 20, 2016
स्टेफनी र मेसन, ह Hongक Kongबाट जनवरी 21, 2016
गैरी, Diane र बारब, संयुक्त राज्य अमेरिका बाट जनवरी 21, 2016
अन्ना र डायना, रूसबाट फेब्रुअरी 4, 2016
Sok heng, Pui San, Chiew Sum & Sing Kwan, मलेशियाबाट "अद्भुत यात्रा - रमाईलो र आँखा खोलि" - भ्रमणको लागि उत्तम ठाउँ! हामीले १ घण्टा पाठ लियौं, जुन जीन द्वारा साझा गरिएको ज्ञानको ठूलो मात्राको कारण केहि अलि लामो भयो। जीन विभिन्न किसिमका पत्थरहरूको व्याख्या गर्नमा मात्र उत्कृष्ट थिए, तर कम्बोडियाको सन्दर्भमा जीवनको आनन्द उठाउनका साथै राम्रा कथाहरू पनि मन पराउँदै थिए। प्रयोगशालामा धेरै महान प्रदर्शनहरू जहाँ तपाईं वास्तवमै विभिन्न प्रकारका रत्नहरू देख्नुहुन्छ र कुन वास्तविक, उपचार वा सिंथेटिक हो भनेर पत्ता लगाउने प्रयास गर्नुहोस्! पाठ पछि धेरै उचित मूल्यमा किन्नको लागि स्थानीय कम्बोडियन रत्नहरूको एक ठूलो चयन पनि छ। धेरै सिक्यो, धेरै रमाईलो गर्यो र एक राम्रो कम्बोडियन रत्नको साथ छोडियो र जेमोलॉजीको लागि नयाँ फेला पारिएको प्रशंसा! - फेब्रुअरी,, २०१।
निकोलस, क्रिस्टोडौलोस र डेसपोइना, ग्रीसबाट फेब्रुअरी 7, 2016
सुश्री कैथरीन, स्पेन देखि, gemology मा तालिम सम्पन्न गरेको छ। फेब्रुअरी 10, 2016
जापानका नाहो र बेलायतका विलियमले जेमोलिक्सको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा गरे। फेब्रुअरी 15, 2016
फिलिप, इङ्गल्याण्ड देखि, gemology मा तालिम सम्पन्न गरेको छ। फेब्रुअरी 19, 2016
डेनमार्कका नुड-एरिक, डोर्टे र डोर्थे, रसायनशास्त्रको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा गरिसकेका छन्। फेब्रुअरी 20, 2016
सुश्री Jerica, संयुक्त राज्य अमेरिका देखि, gemology मा तालिम सम्पन्न गरेको छ। मार्च 4, 2016
सुश्री लीना युक्रेनको देखि, gemology मा तालिम सम्पन्न गरेको छ। कम्बोडियन ढु stones्गाहरूको बारेमा बढि जान्नको लागि मैले संस्थानको भ्रमण गरें। मैले भन्नु पर्छ कि यो ठाउँ सबैको लागि राम्रो गरीरहेको छ - आगन्तुकहरू, गाइडहरू, पेशेवरहरू, खरीददारहरू। यहाँ तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ र सबै अनुभव 'पत्थर' अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। जानकारी स्पष्ट छ, वातावरण अद्भुत छ। म फिलिपलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु - पाठ १ -, २०१।
इ England्ल्यान्डका जेभियर र एन्ड्रियाले रत्नशास्त्रको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा गरे। मार्च 24, 2016
तान्या, सेबास्टियन र स्कट, रसायनशास्त्र मा प्रशिक्षण कोर्स पूरा गरीसक्यो। हामीले हाम्रो year बर्षे छोरालाई एक घण्टा कोर्सको साथ साथ लग्यौं किनकि ऊ रत्न, चट्टान र क्रिस्टलमा धेरै चासो राख्दछ। Jeanne-Pierre विनियोजित घण्टा भन्दा धेरै बढी खर्च गर्‍यो र gemmology को विषयमा अत्यन्त जानकार र उत्साही थियो। हाम्रो छोराले पाठ्यक्रमको राम्रोसँग रमाईलो गर्‍यो, जस्तो हामीले, विशेष गरी प्रयोगशालाको सेसनमा, माइक्रोस्कोप अन्तर्गत बिभिन्न रत्नहरू पहिचान गर्यौं। ऊ एउटा प्रमाणपत्र र प्रासोलीइट ढु with्गा लिएर गयो। धन्यवाद। - मार्च २,, २०१
स England्गिता र डेनियल, इ England्ल्यान्डका, रत्नशास्त्र मा प्रशिक्षण कोर्स पूरा गरे अप्रिल 3, 2016
अस्ट्रेलियाका हिलारी र इयानले रसायनशास्त्रको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा गरिसकेका छन्। अप्रिल 4, 2016
फिलिपिन्सका मारिया र जोआना जेमोलॉजीमा जेमोलॉजी कोर्स पूरा गर्छिन्। Gemological संस्थान मा आधा दिन कोर्स लिए। यो धेरै जानकारीपूर्ण थियो! यो कोर्स पछि, हामी पक्कै पनि रत्नको आकलनको बारेमा १००% बढी विश्वस्त छौं। - अप्रिल,, २०१
ओमल्ली परिवार, संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट, रसायनशास्त्रमा प्रशिक्षण कोर्स पछि। अप्रिल 14, 2016
अस्ट्रेलियाका सिल्भेस्टर र सिल्भिया रत्नशास्त्रको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा गरिसकेका छन्। 12 सक्छ, 2016
सुश्री Akemi, जापान देखि, gemology मा तालिम सम्पन्न गरेको छ। 15 सक्छ, 2016
फिलीपीन्सका जूलियस, मारिफ्लोर, स्यान्ड्रिन, कोलिन र सेड्रिकले रत्नशास्त्रको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा गरे। 29 सक्छ, 2016
Ma। फिलिपिन्सका लुज र युकेका गोर्डनले जेमोलिक्समा जेमोलॉजी कोर्स पूरा गरेका छन्। 31 सक्छ, 2016
अमेरिकाबाट आएका केटी, एडवर्डो, जेनिफर, र जेफ्रीले रत्नशास्त्रको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा गरिसकेका छन्। जुन 16, 2016
संयुक्त राज्य अमेरिकाका जेमी र एलीले जेमोलिक्समा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा गरे। जुलाई 18, 2016
फ्रान्सकी पाउलीन र रोनानले जेमोलिक्समा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा गरिसकेका छन्। अगस्ट 1, 2016
अमेरिकाबाट आएका सु, मरेन र ब्रुसले रसायनशास्त्रको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा गरे। अगस्ट 11, 2016
फ्रान्सका एन र ओलिभियरले जेमोलिक्समा जेमोलॉजी कोर्स पूरा गरिसकेका छन्। अगस्ट 18, 2016
अमेरिकाबाट आएका म्याक्स र हेस्टरले जेमोलॉजीमा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा गरिसकेका छन्। अगस्ट 19, 2016
अस्ट्रेलियाका क्यारी र मार्टिजनले जेमोलिक्सको प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा गरे। अगस्ट 20, 2016
कैथरीन, अष्ट्रेलिया, gemology मा तालिम सम्पन्न गरेको छ। सेप्टेम्बर,, २०१
अलेशा र रस, संयुक्त राज्य अमेरिका बाट, gemology मा gemology कोर्स पूरा गरिसकेका छन। सेप्टेम्बर,, २०१
Mr.Thiery, फ्रान्स, एक हप्ता (30 घण्टा) gemology मा को तालिम सम्पन्न गरेको छ। सेप्टेम्बर २-26--30०, २०१।
अली र जो, जेमिलोजी मा प्रशिक्षण कोर्स पूरा गरिसकेका छन। अक्टोबर 20, 2016
Lenny, हाम्रो कान्छो विद्यार्थी, फ्रान्स, gemology मा तालिम सम्पन्न गरेको छ। अक्टोबर 21, 2016
अमेरिकाका स्टिभन र जेनले जेमोलिक्समा प्रशिक्षण कोर्स पूरा गरेका छन्। डिसेम्बर 5, 2016
फियाना र शाह, इion्ल्यान्डका, रत्नशास्त्र मा gemology कोर्स पूरा गरे। डिसेम्बर 9, 2016
आइस्लिन र डोमिनिक, ह Hongक Kongबाट।डिसेम्बर 12, 2016
कृपया हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस बुकिंग को लागी।